काममा जिरो, खादा लगाएर हिरो भयो एनअारएन | himalayakhabar.com
काममा जिरो, खादा लगाएर हिरो भयो एनअारएन
– सूर्य लम्साल
हिमालयखबर | 16th Dec 2018, Sunday | २०७५ पुष १, आईतवार २०:०८
एनआरएनए अमेरिकाका वर्तमान पदाधिकारीहरूको गतिविधिले केही महिनादेखिनै मलाइ उदेक लागिरहेको छ । पदाधिकारीहरू एनअारएनको गत चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने भन्दा पनि अाउँदो चुनावका लागि भनेर विगत ६ महिना अघिदेखिनै प्रचारप्रसारमा लागिरहेको मलाइ मात्र होइन धेरैले महसुस गरिरहेका छन् ।
एनअारएनका पदाधिकारीलाई संस्थाको पदिय दायित्वलाइ लात हानेर महिनौ अघिदेखि नै आफ्नो चुनावमुखी प्रचार प्रसारमा लाग्नुले यो संस्था चुनाव गराउनकै लागि मात्र खडा भएको हो कि भन्ने अाभास धेरैलाइ परेको छ ।
वर्तमान पदाधिकारीका कामलाइ नियाल्दा "काम कारवाहीमा जिरो- खादा लगाएर हिरो" भन्ने संज्ञा दिँदा अत्योक्ती शायद हुँदैन होला । अमेरिकाका एनआरएन हरुले अहिल्यै यो "भोट" मागेको "घिनलाग्दो" समाचार मिडियामा मैले मात्र होइन धेरैले सुन्न चाहेका छैनन् ।
अझै ६ महिना छ, केहि गरेर देखाउ । हामीले त डेढ बर्ष मात्र पायौं । समय छोटो भयो भनेर उम्कन पनि खोज्दैछौ । अनि पुरै डेढ बर्ष केवल अर्को चुनावमा कसरी जित्ने भनेर गुह्य र बोतले छलफल गरेर लुते पाराले संस्थालाई गिराउदै पनि छौ । "इथिक्स" भन्ने पनि केहि कुरा हुन्छ - संस्थाको "मर्यादा" हुन्छ , खै त्यसको ख्याल गरेको ?
अमेरिका जस्तो ठाउँमा दशकौं देखि मेहनत, ज्ञान र अनुभव बटुलेका दिग्गज नेपाली छन् । तर यस्तै घिनलाग्दा कृयाकलाप ले तिनीहरु संस्थामा योगदान गर्न त के नाम सुन्न पनि चाहन्नन् ।
के यस्तै गरेर दुइचार हजारको मालिक बनेर खादा लगाउदै हिड्ने हो कि हाम्रा अग्रजले परिकल्पना गरेको यो संस्थालाई अमेरिका र विश्वभरिको नेपालीको हितमा भएको आभास गराउने हो ?
मेम्बरशीप ड्राइभ बर्षेभरि हुनुपर्ने थियो । तर "जब भयो राति, अनि बुढी ताती" झैँ "लौ मेम्बरशीप खुल्यो" भनेर हिन्दी फिल्मको प्रचारशैलीमा सदस्यलाई आकर्षित गर्नु परिरहेको छ । खै कसरी हो आकर्षित गर्ने - "मलाइ भोट हाल्न सदस्य बन्नु" भन्नु पो पर्या छ । यो पाराले हे मेरा मान्यजनहरु, तपाईंहरु चुनावमा नजानोस् - लड्ने र पल्टने ग्यारेन्टी नै छ । यो पटक पनि फेरि पोहोर जस्तै.. सोच्नु भाको छ कि?
संस्था धेरै आवश्यक छ र यसका सम्भावाना धेरै छन् । खोइ त्यी सम्भावाना केलाएको? खोइ त्यी सम्भावाना लाइ मेम्बर स्तर बाट उकासेको? खोइ हाम्रा च्याप्टर हरुसंगको सहकार्य? खाली चुनावमा आएर भोटर्स बनाउन मात्र चाहिने हो च्याप्टर ?
नेतृत्व छनौटलाइ पारदर्शीसँगै क्लिन नबनाए सम्म र सही प्रजातान्त्रिक नेतृत्व नआएसम्म संस्थाको मकुण्डो खुल्दैन । तपाइ आउनु ठुलो कुरो होइन - सहि व्यक्ति आउनु ठुलो कुरो हो ।
के तपाईं आफूलाई मात्र सही भन्नुभाको हो ? त्यसैले "मलाई" जिताउ भन्दै सालैभरि कराउनुहुन्छ ? खै "राम्रा" लाइ जिताउँ" भनेको? तपाइको खोट त्यहीँ छ - पब्लिकले बुझेका छन् ।
अझै समय छ - आफूलाई सच्याउनुस र संस्थालाई बचाउनुस । संस्थाका बहालवाला पदाधिकारीले मर्यादापालन गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुस र पालन पनि गर्नुस । कराएर भोट पाइन्न । अमेरिकाका वास्तविक भोटर्स विद्वान र बुझेका छन् ।
(लेखक एनअारएन अमेरिकाका पूर्व पदाधिकारी हुन् ।)
२०७५ पुष १, आईतवार १९:५६
कोलोराडो (अमेरीका)- अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरले स्वर सम्राट नारायण गोपालको २८ औँ स्मृती दिवस पारेर कवि गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ । ...